विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था : कम्पनी विश्लेषण ( बुधबार, बैशाख २५, २०७६)
कम्पनीले २०७५ पुस १५ गते सम्पन्न वार्षिक साधारणसभाबाट बोनस शेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । कम्पनीले गत आवको नाफाबाट शेयरधनीलाई १० प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. १९ करोड ४८ लाख छ । १० प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गरेपछि कायम चुक्तापूँजीको शत प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पनि पुस १५ गते सम्पन्न वार्षिक साधारणसभाले पारित गरेको छ ।
कम्पनीले चालू आवको चैत मसान्तसम्ममा रू. ३ करोड ७० लाख नाफा कमाएको छ । यो नाफा गत आवको तुलनामा दुई गुणा बढी हो । सो अवधिमा कम्पनीले रू. १ करोड ५४ लाख नाफा कमाएको थियो । कम्पनीले चैत मसान्तसम्ममा रू. ६० लाखभन्दा बढी खराब कर्जा उठाउनुका साथै खुद ब्याज आम्दानी बढाएकाले नाफामा वृद्धि भएको हो । मंगलवार कम्पनीको शेयरमूल्य ७ अंक घटेर रू. ६०५ मा बन्द भएको छ ।
2019-05-08 - 68 view(s) - abhiyan